BBC Somali - Warar - Weerar ka dhacay magaalada Abuja
Weerar ka dhacay magaalada Abuja
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 27 Novermber, 2012, 01:57 GMT 04:57 SGA
Ciidanka booliiska dalka Nigeria
Booliiska dalka Nigeria ayaa sheegay in rag dabley ah ay weerareen xarun dhinaca ammaanka ah oo si weyn loo ilaaliyo, oo ku taal magaalada caasimadda ah ee Abuja.
Dableyda, ayaa halkaasi ka sii daayay maxaabiis.
Dhismaha, ayaa waxa degennaa ciidan gaar ah oo la dagaallama burcadda, waxaa kale aoo halkaasi lagu hayay xubno looga shakiyay inay ka tirsanaayeen kooxda Islaamiga ee Boko Xaaraam>
Booliisku, waxay sheegeen in ilaa soddon maxaabiis ah ay baxsadeen intii weerarku socday, laakiin intooda badan dib loo soo qabtay.
Laba ciidanka booliiska ayaa dhintay.
Axaddii, ciidanka ayaa ku eedeeyay Boko Xaaraam ( oo dooneysa inay riddo dowladda Nigeria, oo ay ku soo rogto nidaam sharci Islaami ah oo adag --) laba weerar oo is qarxin ah oo ka dhacay saldhig militeri.
Afrika Ciid Wanaagsan